Top 8 Best Isicelo Mobile for Cryptoсurrency - Blockchain News
EyoMqungu 18, 2018 admin
Top 8 Best Isicelo Mobile for Cryptoсurrency
Ukuba achithe ixesha elininzi ekurhwebeni crypto-kwizimali, ngoko aninako ukwenza ngaphandle izicelo mobile. Siye eziqokelelweyo ezisibhozo izicelo kakhulu lula nezaziwayo, ekufuneka zibe smart.
Top 8 lwesicelo best Mobile for Cryptoсurrency
Apha uyakwazi ukufumana yonke ingcaciso malunga utshintsho lwezifundo ze imali ngokuthi utyale imali ezithembisayo. Akwanelanga ukubongeza kuluhlu yaye uya kukwazi ukulandelela ukuhla nokunyuka ekuhambeni ngaphezu 2,000 zemali. Ixhasa zonke ii-exchange kakhulu ethandwa, kubandakanya Coinbase, Bittrex, Bithumb, Poloniex, Binance, Coinone and Bitfinex.
Le app lusebenza ku Android yaye IOC
Bitcoin Checker ikwanceda amazinga otshintshiselwano monitor lwemali. Iqokelele ingcaciso evela ngaphezu 80 zingxoxo. In isicelo, uyakwazi ukucwangcisa ixesha lekhefu ngokusebenzisa kunye izaziso malunga amaxabiso ezihlaziyiweyo ziya kwamkelwa. Ukwengeza, uyakwazi ukuqwalasela izaziso isandi.
Le app isebenza kuphela Android
Earn.com – ukunqunyanyiswa apho uzokwazi bitcoins baxhasiwe ukuba imiyalezo kunye nemisebenzi. Zingakotshwa cashed ngokusebenzisa Bitcoin-yamali exchange Coinbase. Kodwa kubalulekile ukuphawula ukuba ukuze bafumane imali apha etheni, kufuneka ube ezithile ubunzima ekuhlaleni crypto kwaye Banengqiqo elungileyo ye isihloko lwemali crypto. iimpendulo zakho uya kakhulu xa une-akhawunti ethandwa Twitter.
Le app lusebenza ku Android yaye iOS
Esi sicelo siza kukuxelela malunga iindawo kunye nabantu abathengisa iimpahla kunye neenkonzo bitcoins kwindawo yakho. Yintoni ngaphakathi? imephu interactive, uluhlu oluhlaziyiweyo asele ezikufuphi, uluhlu iivenkile ozithandayo kunye wokubala for ukuguqulwa bitcoin.
BitBuds kuzixuba luhlobo womnatha lwentlalo uluntu cryptocurrency. Injongo ababhekisi phambili kukuba yokuhlanganisa crypto-abathanda kwihlabathi jikelele kwaye ukudala iqonga ingxoxo kubo. Ngoko ke apha unako ukwenza imfundo-self, ukubuza imibuzo, uncedo abanye baqonde crypto-kwizimali, ukuxoxa iingxaki abahlobo abatsha. In isicelo, ungalayisha imifanekiso kunye neevidiyo, ukudala izingxoxo, ukuqhuba ebhalelwa neefayile exchange.
Isicelo Gliph yinto efana Avito kosomashishini imali crypto. Abasebenzisi ukuthenga nokuthengisa iimpahla kunye neenkonzo bitcoins ngokudibaniselana ngqo kunye nabanye. Ngaphakathi Gliph kukho inkqubo isithunywa kunye nentlawulo ekhuselekileyo, ngayo nawe uyakwazi ukuqhuba imicimbi ngaphakathi isicelo ngokwalo.
Isicelo ukukhusela ii-akhawunti zakho kunye ukuchongwa factor-amabini. Mhlawumbe, le into yokuqala ekufuneka lingamiselwa ukuba isipaji yakho ebotshelelwe kwifowuni. Isicelo yenza Iikhowudi ngaphandle eku xhulumaneni kwi Internet, shoka baqhubi ezininzi kunye akhawunti kwaye ngokuzenzekelayo iqwalaselwe QR-code. Ukongeza akhawunti usebenzisa QR codes, kufuneka ukuba anike unikezelo isicelo lwecamera.
Isicelo CoinPaper ibonisa ixabiso entsha lwemali crypto kwisiqalo kwefowuni njengendlela lodonga. Lula kukuba akukho kuphinda kufuneka ukuba ukuvula izicelo ezizodwa nje ukujonga amaxabiso emali crypto. yonke into, ukuqala kwiskim umbala kwi ixesha isikali, iqwalaselwe ngokupheleleyo. Amaxabiso agqitywe rhoqo ngomzuzu nge CryptoCompare API.
TabTrader i terminal simahla ngenxa kokuhlawulwa kwemali crypto kwi Exchange ezithandwayo. Phakathi kwazo Bitstamp, HitBtc, Huobi, Kraken, Bitfinex, Coinbase, Bittrex nabanye. Ivumela yokurhweba ngababini ezahlukeneyo lwemali crypto: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripples, Namecoin, ogcwele, Etherium. Phakathi kwezinye izinto, le app iinda- ezivela Reddit, Coindesk and Bitcoin Magazine.
Bitcoin Hardforks yintoni na?
Yintoni ifolokhwe? T ...
Post Previous:Blockchain News 18 EyoMqungu 2018
Post Next:Blockchain News 19 EyoMqungu 2018